Yakakwenenzverwa esimbi simbi machira Vagadziri - China Yakakwenenzverwa simbi isina machira mafekitori, Vatengesi
yakabwinyiswa simbi yesimbi mutengo
Tsananguro yakapusa nezve yakakwenenzverwa simbi yesimbi sheet
Kune yakapfava Simbi isina simbi, kazhinji inopukutwa semashizha zvakare zvinoreva hutete hwakatetepa imwe, asi imwe nguva ndiro yakanyanya kuve inodikanwa kukwenenzverwa kunyorera chaiko. Uye yakawanda yeplate inokwenenzverwa nema mechanical polishing nzira.
Stainless simbi inowanzo shandiswa nzira yekukorobha：
Parizvino nzira dzinowanzo shandiswa ndedze: electrolytic polishing, electrochemical polishing, mechanical polishing
Iyo electrochemical makorari maitiro akapatsanurwa kuita nhanho mbiri: (1) Macro yekumisikidza: iyo yakanyungudutswa chigadzirwa inopararira mu electrolyte, uye kumeso kushatisa kwechinhu kuderera, Ral μm. (2) Yakadzika-mwenje kuenzanisa: Anodic polarization, kupenya kwepamusoro kunovandudzwa.
NO.4 ndiwo rudzi pamusoro makorari kurapwa muitiro. Makorari uye kupedza simbi isina tsvina pepa ine yekugaya zvinhu ine chidimbu saizi ye150 ~ 180 sezvakatsanangurwa muGB 2477.
Chiedza annealing ndeye yekumusoro yekugadzira tekinoroji, kunyanya mushure mekuvharirwa munzvimbo yakavharirwa, tembiricha inodzikiswa zvishoma nezvishoma munzvimbo yakavharirwa neinenge mazana mashanu madigiri uye zvobva zvadzikama zvakasikwa, pachave nekupenya kuti isakonzere decarburization.